डिस्कोमा तीज! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← जब पिउँछु नशाहरु..!!
पसिनाको समस्या र बच्ने उपायहरू →
‘आधुनिक फेसन छिनेको कम्मर नाचिन्छ कसेर, भन्नेको मुख थुनिन्न क्यारे बन्धनमा बसेर, जमानासँगै फेरीयो चिज, नाचौँ हामी डिस्कोमा तीज’ बोलको गीत सहित कोमलले यसपटकको तीज मनाउने भएकी हुन् । उनको एल्बम अडियो, भिडियो दुबैमा बजारभरी भैसकेको छ । रमेश बिजीको शब्दमा रहेको गीतमा बिजु बज्रको संगीत रहेको छ । उनलाई एल्बममा गयिका रितु कँडेल र कृष्ण रेउलेले सहयोगी स्वर दिएका छन् ।
कोमलले एल्बमको प्रचारको लागि जापान, वेलायत, जर्मन, नयाँदिल्ली र नेपालको चितवन र पोखरमा लाइभ गाउने कार्यक्रम तय गरीसकेकी छिन् । उनका यसअघिका यस्तै उटपट्याङ एल्बमहरुले पनि व्यापक चर्चा र परिचर्चा पाएको थियो । उनकको एउटा एल्बम ‘मै हजुर तिम्री तरुनी’ पनि चाँडैनै बजारमा आउने तयारीमा छ । एल्बमको बजार र भविष्य कस्तो रहला त्यो त केही समयपछि नै थाहा पाइहाल्छ । जेहोस हाम्रो तर्फबाट कोमल वलीलाई सफलताको शुभकामना छ ।